Olee otú Download CollegeHumor Videos
> Resource> Video> Olee Otú Ị Pụrụ Download CollegeHumor Videos
Ị pụrụ ịbụ nnọọ maara na CollegeHumor nwere ike ịbụ na enwekwa mmasị na ya nke ukwuu. Ọ na-anapụta fun ka ọtụtụ ndị na ya oké ọdịnaya, gụnyere na-akpa ọchị videos, foto, isiokwu na njakịrị. Mgbe ụfọdụ mgbe ị na-abịa gafee oké videos, i nwere ike na-ele ha n'elu na n'elu ọzọ. Ma ihe ma ọ bụrụ na e nweghị internet njikọ? A ezi ihe ngwọta a bụ ibudata vidiyo si na CollegeHumor maka offline playback. The Wondershare AllMyTube (AllMyTube for Mac) bụ nri ngwá ọrụ inyere gị aka. Ọ nwere ike na ibudata ọ bụla na vidiyo si na CollegeHumor na ọbụna tọghata ha ka ọtụtụ na-ewu ewu formats iji etinye n'ime obere ngwaọrụ. Amagbu, ọ bụghị ya? Ka anyị hụ otú iji ya ibudata CollegeHumor videos n'okpuru.
Akpa, ị chọrọ ka ibudata ma wụnye a usoro na kọmputa gị. E nwere abụọ nsụgharị na ị ga-ahọrọ na otu onye gị na kọmputa. Mepee omume na-esi njikere mgbe nwụnye. Anyị ga-eji windows version-egosi na ị zuru ezu nzọụkwụ.
1 Chọta oké CollegeHumor videos-amasị gị
Gaa na website nke CollegeHumor na pịa Video taabụ. Mgbe ahụ gbadaa na-ahụ videos na-amasị gị. Pịa Play button na-egwu ha na nchọgharị.
Cheta na: Cheta na-egwu videos na otu nke atọ nchọgharị: ntụgharị, Firefox na Chrome. Nke a nwere ike hụ na videos nwere ike achọpụtara site omume na-ahụ ga-ebudatara.
2 Download CollegeHumor videos na ụzọ abụọ
Otu ụzọ ibudata videos bụ pịa Download button n'elu nri nke video ihuenyo. Ndị ọzọ bụ idetuo url nke video na pịa Paste URL bọtịnụ na usoro.
Ị nwere ike tinye ọtụtụ videos ka download kwụ n'ahịrị site na n'elu ụzọ abụọ. Nke a na usoro ike ibudata 5 videos ndabara n'otu oge. Na o nwere ike ibudata ruo 10 videos n'out oge site na ụfọdụ ntọala Mmasị.
3 tọghata CollegeHumor videos (nhọrọ)
Gaa Finished n'ọbá akwụkwọ ịchọta ebudatara videos. Nwere a ngwa ngwa Doppler nke ihe ọmụma bụ isi nke videos na ị pụrụ ịchọpụta na ụfọdụ videos na-na usoro nke flash nke bụ dakọtara na ngwaọrụ gị. Na ikpe, ị ga-mkpa iji tọghata videos. Pịa tọghata bọtịnụ na nri nke video ahụ n'ọbá akwụkwọ ma họrọ a format ị chọrọ. Pịa Ok na-video converted.
Nnọọ mfe, ọ bụghị ya? Ị kwesịrị ị na ibudata otu na-enye ya a laa. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịgwa ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na unu.
Video Splitter maka Mac: Olee otú SPLIT Video na Mac
Get a Mmemme Mma Karịa breeki aka
Olee otú Mepụta a Flash Video
Olee otú iji tọghata FLV ka SWF (Windows 10 gụnyere)